I-Sony Xperia phakathi kweyona inikezelwe kwi-red dot 2012 | I-Androidsis
Mailen bravo | | Iiselfowuni, Sony
Izixhobo zeselfowuni ezinenkqubo yokusebenza ye-Android zizalisa intengiso ngeendlela ezahlukeneyo, amaxabiso kunye noyilo, kwaye amabhaso abomvu amachaphaza ayindlela yokwazi ezinye zeefowuni ezibaluleke kakhulu ezikhoyo, nokuba kungokusebenza kobugcisa okanye uyilo.
Kwaye ngo-2012, phakathi kweefowuni ezahlukeneyo ezinikezelwe imbasa yamachaphaza abomvu, ezine zivela Uphawu lwaseJapan u-Sony. Ngaphezu koko, ezintathu zeefowuni zikhethwe ngamabhaso abomvu njengowona mnxeba ungcono we-Android ngokwayilwa kwaye uvela I-Xperia yosapho.
Iifowuni ze-Xperia ezisebenzayo kunye ne-Xperia zanikezelwa ngokubonisa umgangatho ophezulu kunye nesitayile esincinci. Naye ngokunjalo Inkqubo ye-Smart Wireless Headset kunye SmartDock I-Xperia ion yamkelwa ngembasa yamachaphaza abomvu yoyilo olusebenzayo kunye nokusebenza okumangalisayo, kwaye ekugqibeleni i-smartphone Xperia ray efumene into ebekekileyo ngokubonakala kwayo kunye nokusetyenziswa kwayo.
Umsitho wamabhaso wabanjwa ngoJulayi ophelileyo eJamani, kwaye ijaji yayiphethe kuvavanyo lweekhrayitheriya ezahlukeneyo, ukusukela kwinqanaba lokuyila isixhobo ngasinye ukuya kwindalo yemveliso kunye nokuqina.
Into enomdla ngayo amabhaso abomvu kukuba ngaphezulu kwe-14.000 yezixhobo ezivela kumazwe angama-70 ehlabathi atyunjiweyo. Ukuhlalutya uluhlu olupheleleyo kuya kutyhila iinyani ezithile ezinomdla malunga nokuqhubela phambili kweshishini.
Ukongeza, kuya kuba lunomdla ukubona ukuba ezinye izixhobo ze-Android zibethe i-Sony Xperia ukuze zifumane la mabhaso, kunye nezinye izinto ezishukumayo ezinokuthi zibaleke phantsi kweenkqubo zokusebenza ezinje ngeWindows Phone okanye iSymbian, phakathi kwabanye.
Ewe kunjalo, nawuphina umsitho wokunikezelwa kwamabhaso njengamachaphaza amachaphaza abomvu unxulunyaniswe nomdla kunye nezinto ozithandayo. Ngayiphi na imeko, kukho izizathu ezinikezelwe ngabaququzeleli ngamabhaso afunyenwe ngu I-Sony Xperia yoSapho.
I-Xperia esebenzayo inika isikrini esinganyangekiyo kwaye inokusetyenziswa ngeminwe emanzi okanye kwilanga elingaphandle. Inkqubo ye- Xperia ion Inoyilo olulula kodwa olukwaziyo ukwenza imvakalelo yokudada xa isezandleni zethu. I-SmartDock inenkqubo yokubukela ye-ergonomic, esivumela ukuba sibeke iselfowuni kwaye sijikeleze kamnandi ukubona ukusuka kwenye indawo. I-Xperia ray ikhethelwe uyilo lwayo oluncinci kunye nolunamandla, olulungele ukuhanjiswa ngesandla kunye nobukhulu obufanelekileyo, kwaye iseti yentloko eyabelwe incinci kuyilo kodwa inamandla kwaye inamandla kakhulu.
Kubonakala ngathi uSony uza kukhuphisana ngokupheleleyo ne-Samsung kule mihla izayo ngokweefowuni eziphathwayo kunye nezixhobo zeefowuni.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Sony Xperia tipo, i-smartphone entsha yakwa-Sony ene-SIM ezimbini
Ikhonkco - Android Authority
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Sony » I-Sony Xperia ifumana amabhaso ama-5 abomvu
Zeziphi iifowuni ezintle. Emva koko iiapile ezincinci ziza nobubhanxa ...
I-Apex Launcher, esona siqalisi silungileyo se-Android 4.0